Shiinaha 1.8m Dhexroor weyn oo Magnetic Separator warshad iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huate
Codsiga:Alaabtan waxaa si gaar ah loogu talagalay oo la soo saaray iyadoo loo eegayo shuruudaha warshad ka faa'iidaysiga: qalabka size waaweyn iyo waxtarka sare ee magnetite kala soocidda.Iyada oo si cajiib leh kor loogu qaado awoodda processing iyo soo kabashada ee magnetite, waxaa loo isticmaali karaa ka hor / ka dib shiidi ama kala soocidda xoogga saaray.
◆Nidaamka magnetic wuxuu qaataa habaynta qaybinta tiirka birlabeedka ballaaran oo cidhiidhi ah, kaas oo faa'iido u leh inuu hagaajiyo soo kabashada macdanta iyo xoojinta darajada.
◆Xagga xirmada magnetic wuxuu gaari karaa 160°, iyo xariiqda kala soocida wax ku oolka ah ee durbaanku waa 1.2 jeer dhexroorka durbaanka 1.5m ee hoos yimaada xagasha xirmada magnetic.Ku darida dhagaxa gangong way fududahay in la soo baxo, taas oo hagaajinaysa saameynta kala-soocidda qalabka.
◆Taangiga leh qulqulka qulqulka, iyada oo loo marayo beddelka valve-platet valve trottle, hagaaji heerka dheecaanka macdanta ee haanta, kor u qaad saamaynta kala-soocidda.
◆Awoodda processing ee kala-soocidda magnetic CTS1840 waa in ka badan 300 tan saacaddii.
◆ Habka xiridda isku dhafka ah ee shaabad farsamo oo badan oo jeexdin ah iyo giraanta bushimaha waxaa loo isticmaalaa dhamaadka shafka rullaluistemadka si looga fogaado wasakhda dhamaadka usheeda inay soo gasho oo ay waxyeeleyso xajinta.
◆Qaybta sare ee daboolka aluminiumka dhamaadka waxay qabataa qaabdhismeedka jeexdin ballaaran iyo suunka qarsoon ee suunka si looga fogaado dhexgalka saxarka macdanta ee dusha isku dhafka ah ee qaybaha dhamaadka usheeda dhexe ee wax soo saarka iyo xoojinta xiritaanka qalabka.
Hore: Kordhinta Kala-duwayaasha Magnetka
Xiga: Taxanaha CFLJ Rare Earth Roller Magnetic Separator
Taxanaha HTK Birta kala soocida ee Miinada Magnetic
Taxanaha guddiga qoyan ee SGB Strong Magnetic Separator